Nagu saabsan - Shijiazhuang Kunxiangda Technology Co., Ltd.
Shijiazhuang Kunxiangda Technology Co., Ltd. waxaa la aasaasay 2013. waxaan nahay soosaar xirfadle ah oo dhexdhexaadiya dawooyinka iyo shirkad ganacsi oo loogu talagalay dheeh dhexdhexaad ah, iyo walxo kale oo kiimiko ceyriin ah. Warshaddeenu waxay ku taal aagga horumarinta dhaqaalaha iyo farsamada ee magaalada Shijiazhuang, gobolka Hebei. Wadarta aagagga waa qiyaastii 50 hektar, waxaana jira in ka badan 300 oo shaqaale, oo ay ku jiraan 9 shaqaale farsamo.
Waxaan inta badan soo saarnaa 1,3-dimethylurea (DMU) oo waxaan ganacsi la sameysanaa Methylurea (MU), 6-Amino-1,3-dimethyluracil (DMAU), 6-Chloro-3-methyluracil (CMU), 6-Chloro-1, 3-dimethyluracil (CDU), Sodium Cumenesulfonate (DMS), Ethylene glycol diformate (EGDF) iyo kuwa kale ee dawooyinka dhexdhexaadiya iyo dheeh dhexdhexaad. Waxaan diyaarinay koox soo iibin xirfadle ah oo ka caawisa macaamiisha badan ee ajnebiga ah inay helaan alaab-qeybiyeyaasha ugu habboon uguna mudan suuqa gudaha ee Shiinaha. Macaamiilkuna si isku mid ah ayey noo aqoonsadeen. Muddo ku dhow toban sano oo waayo-aragnimo ah, waxaan ku leenahay sumcad wanaagsan macaamiisha hore iyo kuwa cusub. Waxyaabaha loo dhoofiyo Yurub, Koonfurta Ameerika, Aasiya, Bariga Dhexe iyo daraasiin kale oo dalal iyo gobollo ah, sidoo kale waxay aasaaseen shabakad suuq geyn ah oo deggan.
Waxaan sidoo kale la sameynay xiriir iskaashi muddo dheer ah jaamacada Tsinghua iyo Hebei University of Science and Technology si loo wanaajiyo tikniyoolajiyada wax soo saarka ee badeecooyinka jira, in la yareeyo qarashka, la hormariyo tayada, lana hubiyo in heerka farsamo uu ku hogaaminayo gudaha iyo dibada waqti isku mid ah, waxaan sii wadeynaa inaan horumarino alaabooyin cusub si aan kor ugu qaadno horumarka waara ee shirkadda. Shirkadaha u hoggaansamaya fikradda wadajirka, daacadnimada, horumarka, guusha-guuleysiga, waxay si adag u aaminsan yihiin in tayada ay tahay nolosha shirkadda, si macaamiisha loo siiyo tayo adeegyada ujeeddada shirkadda.
Waxaan had iyo jeer ku dadaalnaa inaan noqono lammaanaha ugu kalsoonida badan ee macaamiisheenna, waxaanan ku dadaalnaa inaan dhisno macaamil lagu kalsoon yahay, bulsho ahaan la ixtiraamo, shirkad heer caalami ah soo saarista kiimikada wanaagsan Waxaan rajeyneynaa inaan ka heli karno saaxiibo wanaagsan adduunka oo idil! Waxaan sugeynaa booqashadaada!